A Smart Approach to Email Personalization kọwara ya | Martech Zone
Ndị na-ere ahịa na-ahụkarị nzi ozi email dị ka ihe ngosi maka arụmọrụ dị elu nke mkpọsa email ma jiri ya mee ihe. Mana anyị kwenyere na ụzọ amamihe dị na email ịhazi onwe gị na-enye nsonaazụ ka mma site n'echiche dị oke ọnụ ahịa. Anyị bu n'obi ka akụkọ anyị mepụta site na ezi email buru ibu na izipu ozi ịntanetị iji gosipụta etu usoro dị iche iche si arụ ọrụ dabere na ụdị email na ebumnuche email. Anyị ga-enye tiori nke ụzọ anyị wee gbakwunye otu omume iji kọwaa etu enwere ike isi mejuputa echiche anyị na ngwa ahịa ndị a ma ama.
Mgbe aga Bulk
Enwere ozi ezubere maka ndị ahịa niile, yana otu ụzọ ga-adaba maka ha. Ndị a bụ ozi ịntanetị ndị na-enweghị onyinye ngwaahịa na nkwalite ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ nke nkebi. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-ere ahịa anaghị etinye aka na nrụpụta nke mbọ ha ọtụtụ izipu ozi ịntanetị nke na-akwalite mkpọsa ezumike (wdg.
Maka ozi ịntanetị dị otú ahụ, ndị na-ere ahịa adịghị mkpa nyochaa ndị na-ege ha ntị ma chee maka njirisi maka nkewa - ebumnuche ha bụ ịkọwa ụfọdụ ozi dị mkpa maka ndị ahịa niile. Ha na-echekwa oge site na ịmepụta otu email maka nke ahụ. N'ịga n'ihu na ihe atụ nke mkpọsa Black Friday, ndị na-ere ahịa nwere ike ịmalite ya na ozi email izizi nke na-akọwapụta nkọwapụta ihe (dịka, oge).
Olee otú mejuputa. Nzọụkwụ ndị dị mkpa maka nnukwu emailing yiri maka ọtụtụ ngwaọrụ ahịa email. Ka anyị were ha na MailChimp:
Na-agbakwunye akara isiokwu. Tinyere iwu a na-ekwenyekarị nke ịme ka isiokwu dị mma, n'ihe banyere ọkwa Black Friday, ndị na-ere ahịa nwere ike ịkọwa ụbọchị nke mkpọsa a ga-amalite. Ọbụna ma ọ bụrụ na ndị debanyere aha anaghị emeghe email ahụ, ha nwere ike ịhụ ụbọchị mgbe ha na-enyocha igbe email ha.
Mepụta email. Na mgbakwunye na ịmepụta ọdịnaya email n'onwe ya, usoro a gụnyere ohere ịmecha email na nha ihuenyo dị iche iche wee nwalee ya.
Mgbe iji hazie ozi ịntanetị
Anyị na-amalite ileba anya na ike nke sọftụwia ịzụ ahịa iji kpalite ozi ndị ahịa ma lekwasị anya na mkpọsa email na onye debanyere aha ya. Banyere ịhazi ozi email dị iche na ọkaibe, anyị ga-amata ọdịiche nhazi nke onwena ndị ahịa nwere ike ijikwa onwe ha na nhazi nke onweebe ha nwere ike chọọ enyemaka ndị ọkachamara (ị ga-ahụ etu esi achọ ịmara asụsụ edemede n'asụsụ Salesforce Marketing maka ịhazi ọdịnaya). N'ezie, ndị na-ere ahịa nwere ike itinye ọkwa abụọ maka nsonaazụ pụtara anya.
Nhazi ọkwa nke onwe
Na ọkwa dị mkpa, ịhazi ozi email na-elekwasị anya na nke kachasị mma iji meziwanye ọnụego emeghe. Ọ dabara na ụdị ozi dị iche iche ebe ịchọrọ iji gwa onye ahịa ya okwu dịka ozi ịntanetị, nyocha, akwụkwọ akụkọ.
Anyị na-enye ndị na-ere ahịa ka ha jiri usoro dị mfe itinye n'ọrụ iji hazie ozi ịntanetị.
Inye aha onye ahịa na ahịrị isiokwu na-eme ka ozi-e gosipụtara site na ọtụtụ ndị ọzọ na igbe mbata ma kwe nkwa mụbaa ọnụego emeghe nke ozi ịntanetị site na 22%.
N'otu aka ahụ, ịkpọ ndị ahịa aha site na aha email bụ ihe na-eme ka ozi email bụrụ nke onwe ma na-ewulite ntụkwasị obi ndị ahịa.
Gbanwe aha ụlọ ọrụ dị na ngalaba site na otu aha aha nwere ike inye mmụba nke ruru 35% na ọnụego emeghe. A ga-ekwe omume iji nke a Usoro bụ na-ezipụ ozi ịntanetị na ahịa si ahịa nnọchiteanya na-arụ ọrụ ugbu a na ha.
Ọrụ nke ịhazi isiokwu ahụ, site na ngalaba na email ga-ebu ibu nke oge na ọrụ aka ma ọ bụrụ na ọ bụghị akpaghị aka site na ngwanrọ ahịa ahịa email nke oge a.
Olee otú mejuputa. Anyị ahọrọla iji gosipụta usoro ahaziri iche nke akọwapụtara na Microsoft Dynamics for Marketing, ngwa ngwa azụmaahịa na-ekpuchikwa ahịa email. Mgbe ị na-ekepụta email, ndị ahịa na-agbakwunye ọdịnaya dị ike nke na-ejikọ na ndekọ ndị ahịa. Maka nke ahụ, ha na-eji bọtịnụ Enyemaka Dezie “ ”Dị na ogwe ihe odide ederede mgbe a họọrọ ederede ederede na onye na-ese ihe ngosi. Usoro a ga - agbanwe ọdịnaya di omimi na ntanetị na ozi sitere na ndekọ ndị ahịa ozugbo ezitere email ahụ.
Ọkwa dị elu nke mmadụ
Na ọkwa dị elu, ịhazi ozi email na-aghọ onye na-agbanwe egwuregwu ka anyị na-ekwu ugbu a banyere ịhazi ọdịnaya email na ngalaba ndị ahịa ma ọ bụ ọbụlagodi onye nnata ọ bụla. Oku a maka itinye data ndị ahịa bara ụba na ọrụ - ndị ahịa nwere ike ịchọ ozi nkeonwe (afọ, okike, ebe obibi, wdg), akụkọ ịzụ ahịa, ịzụta ihe ịchọrọ, yana ndepụta ndị ịchọrọ iji mepụta ozi ịntanetị bara uru n'ezie maka ndị ahịa.
Mgbe ndị ahịa jikọtara ịzụta na ịzụ ahịa nke ndị ahịa n'ime ahịa email ha, ha na-adị mkpa maka ọdịmma ndị ahịa na ọdịnaya otu-otu. Ka ha na ndị ahịa na-asụ otu asụsụ, ha gbasien'ụzọ dị irè karị. Dịka ọmụmaatụ, ndị na - ere ahịa nwere ike izipu nhọrọ nke uwe mgbede na ngwa maka onye ahịa nke chọtara ha n'oge na - adịbeghị anya mana ọ zụtaghị.
Ndị na-ere ahịa na-enweta ọnụọgụ pịa dị elu maka ozi ịntanetị na-akpọsa ọbịbịa ọhụrụ ma ọ bụ mkpọsa ahịa mgbe ha na-ekewa ndị ahịa ma na-egosi Nkwado ngwaahịa dị mkpanye ndị ahịa. Iji maa atụ, ha nwere ike hazie mkpọsa ozi email maka oge ire ere maka oge ụmụ nwanyị na ndị na-ege ntị.
Olee otú mejuputa. Ọ bụrụ na ndị ahịa nyefere azụmahịa ahịa email ha na Salesforce Marketing Cloud, ha ga-enwe ohere ịnweta imeziwanye ihe email. Anyị na-atụ aro ka ha chee echiche gbasara usoro ịre ahịa email ma tinye ndị na-ahụ maka ịre ahịa Salesforce n'ọrụ. E nwere ihe abụọ ị ga - eme:
Mepụta data ndọtị ebe ndị ahịa data nọ. Mgbe ị na-ezipụ ozi-e, sistemụ ahụ ga-ejikọ na mgbakwunye ndị a iji nye ọdịnaya email maka ndị ahịa ọ bụla.
Tinye ọdịnaya nke ahaziri iche na email. Dabere na ma akụkụ nke dabere ma ọ bụ onye na-edebanye aha site na ndebanye aha dị mkpa, a na-eji ọdịnaya dị ike ma ọ bụ AMPscript mee ihe n'otu n'otu. N'ime ihe omimi di omimi, ndi ahia na akowa otu a esi eme ya (dika imaatu, nwoke na nwanyi). Nke a anaghị achọ nka na ụzụ, yabụ ndị ahịa nwere ike ime ya n'onwe ha. Ka ọ dị ugbu a, ihe ọmụma nke AMPscript, asụsụ nke ọdịnaya ọdịnaya nke Salesforce Marketing Cloud, bụ ihe dị mkpa maka ịhazi onwe gị nke ọma (dịka ọmụmaatụ, maka onyinye ngwaahịa ahaziri maka ndị nnata ọ bụla).
Jiri amamihe mara onwe gị
Nhazi nke onwe abiala ibu okwu okwu na ala ahia email. Ọ bụ ezie na anyị na-akwado ebumnuche nke ụlọ ọrụ iji zụlite mmekọrịta dị mma karị na ndị ahịa site na ozi ịntanetị, anyị ka kwenyere na nhọrọ nhọrọ maka ọkwa nke onwe, nke dabere na ụdị email na ebumnuche. Ya mere, ndị ahịa anaghị achọ ịkwa akwa-mee ozi ọ bụla ma zere iziga ozi ịntanetị - ịhazi na ịmepụta ozi ịntanetị ahaziri nke ọma erughị mbọ ma otu ozi ahụ ezubere maka ndị ahịa niile. N'otu oge ahụ, ha na-emeri ntụkwasị obi na mmasị ndị ahịa mgbe ha mepụtara ọdịnaya n'otu n'otu na ozi ịntanetị na onyinye ngwaahịa.
Tags: ampscriptemailemail Marketingemail nkeonweahia igwe ojiiakwụkwọ akụkọ